onlineakhabar.com: OMG हेर्नुहोस् भिडियो !! सरकारी स्कुलका युवतिले युवतिलाई नै रेप जुन भिडियो भाइरल
Amazing Video, Amazing World, India News, Indian Girls and Boys, Video » OMG हेर्नुहोस् भिडियो !! सरकारी स्कुलका युवतिले युवतिलाई नै रेप जुन भिडियो भाइरल
OMG हेर्नुहोस् भिडियो !! सरकारी स्कुलका युवतिले युवतिलाई नै रेप जुन भिडियो भाइरल
प्राय युवा युवतिहरु टिनएजमा नै धेरै किसिमका अनुभवहरु भोगेका हुन्छन् । एउटा शारिरिक अवस्थामा हुने परिवर्तन देखि लिएर व्यवहारमा आउने परिवर्तन प्राय टिनएजमै हुन्छ । त्यसै कारण पनि प्राय यस्तै अवस्थामा युवा युवतिहरु ठूलो ठूलो अपराध गर्न पछि पर्दैनन् । भैरहेको अपराधको आंकडा हेर्ने हो भने पनि यस्तै २० बर्ष देखी २५ बर्ष भित्रकै युवाहरुबाट भएको देखिन्छ ।
कतिपय युवाहरु समयको सहि सदुपयोग गरि त्यही समयमा आफ्नो जिवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यहरु गर्दछन् भने कतिपय नशाको लतमा फस्दछन् । केहि युवाहरु त्यही उमेरमा अलि बढीनै उत्ताउलो तथा उत्श्रृखल बन्दछन् । त्यस्तै यहाँ भारतकै एक सरकारी स्कुलका केटीहरु स्कुल ड्रेसमै उत्श्रृखल कार्य गर्ने र त्यसको भिडियो बनाउने गरिरहेका छन् । जुन भिडियो सामाजिक संजालहरुमा निकै भाइरल भएको छ ।
जुन भिडियोमा तिन युवतिहरु स्कुल ड्रेसमा नै रेप गरेको जस्तो देखिने गरि मोबाइलले भिडियो बनाएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो
Tags : Amazing Video Amazing World India News Indian Girls and Boys Video